ch 14 Matthew – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMateyu / ch 14 Matthew
14:1 Ngelo xesha, UHerode, umphathi wesahlulo sesine selizwe, beva iindaba ezingoYesu.
14:2 Wathi kubakhonzi bakhe: "Lo nguYohane umbhaptizi. uvukile kwabafileyo, kwaye yiloo nto imimangaliso iyasebenza kuye. "
14:3 Kuba uHerode embambile John, wambopha, wamfaka entolongweni, ngenxa kaHerodiya, nomfazi womzalwana wakhe.
14:4 Ngokuba uYohane uthi kuye, "Akukho mthethweni kuwe ukuba umthathe."
14:5 Kwaye nangona wayefuna ukumbulala, woyika abantu, ngenxa yokuba zazibambe ukuthi ungumprofeti.
14:6 ke, ngomhla wokuzalwa kukaHerode, intombi kaHerodiya yangqungqa phakathi kwabo, kwaye ke yamkholisa uHerode.
14:7 Kwaye ke koko wayithembisa ngesifungo ukuba woyinika oko ingakucelayo ngaye.
14:8 kodwa, ekade ngumama wakhe, uthe, "Ndinike apha, ngesitya, intloko kaYohane umbhaptizi. "
14:9 Wathi ke ukumkani buhlungu kakhulu. Kodwa ngenxa yesifungo yakhe, zakhe, nangenxa yabo babehleli ndawonye naye, wayalela ukuba banikwe.
14:10 Wasusa umntu, wamnqumla uYohane intloko entolongweni.
14:11 Yaziswa intloko yakhe ngesitya esimcaba, yaye yanikwa intombazana, yona yayisa kunina.
14:12 Yaye abafundi bakhe beza basithabatha isidumbu, bamngcwabela ngayo. baye kufika, baza bakuxela oku uYesu.
14:13 Xa uYesu akuva oko, wemka apho ngesikhephe, kwindawo eyintlango eyedwa. Ke kaloku izihlwele akuva oko, zamlandela ngeenyawo, zivela emizini.
14:14 Uphuma, wabona isihlwele esikhulu, yaye wathabatha nanceba kubo, waza wabaphilisa imilwelwe yabo.
14:15 Ke kwakuhlwa bafika, abafundi bakhe beza kuye, bathi: "Le ndawo iyintlango, kwaye ilixa ngoku kudlule. Chitha izihlwele, lo nto, ngokuya kungena emizini, baya kuthenga ukutya ngokwabo. "
14:16 Wathi ke kubo uYesu: "Akufuneki ukuba. Banike into etyiwayo nina. "
14:17 Baphendula bathi kuye, "Asinanto apha, ngaphandle kwezonka ezihlanu neentlanzi ezimbini. "
14:18 Wathi kubo, "Ziziseni apha kum."
14:19 Akuba ke wayalela isihlwele ukuba sihlale phantsi engceni, Ezithabathile ke izonka zozihlanu neentlanzi zombini, kwaye nikhangele phezulu ezulwini, wathi ekhangele ezulwini wasikelela, waziqhekeza, wazinika abafundi izonka abafundi, kwaye ke abafundi banika izihlwele.
14:20 Kwaye bonke badla banela. Bayithwala ke iintsalela: elinambini iingobozi zizele ngamaqhekeza.
14:21 Ke inani abo babesidla ezimawaka amahlanu amadoda, ngaphandle kwabafazi nabantwana.
14:22 Waza uYesu ngokukhawuleza wabanyanzela abafundi bakhe ukuba enyuka esikhepheni, kwaye eyandulela kuye ewela ulwandle, lo gama azindululayo izihlwele.
14:23 Ezindulule izihlwele, wenyuka uye entabeni eyedwa, ukuba athandaze. Kwathi ngokuhlwa kufika, yena wayeyedwa khona.
14:24 Kodwa phakathi kolwandle, umkhombe ngapha nangapha ngamaza. Kuba umoya ububavele ngaphambili.
14:25 ke, umlindo ulindo lobusuku, weza kubo, ehamba phezu kolwandle.
14:26 Ambone ehamba phezu kolwandle, babephazamisekile, bathi: "Kufuneka ube Ngumbono." Batsho bakhala, ngenxa yoloyiko.
14:27 yaye ngoko nangoko, UYesu wathetha kubo, bathi: "Yibanokholo. Kuyinto I. Sukoyika."
14:28 Wandula ke uPetros wasabela ngokuthi, "Nkosi, ukuba nguwe, oda ukuza kuwe phezu kwamanzi. "
14:29 Wathi yena, "Yiza." Waza uPetros, babesihla emkhombeni, wahamba phezu kwamanzi, ukuze ukuya kuYesu.
14:30 kodwa ngokwenene, ebona ukuba umoya onamandla, woyika. Ke kaloku waqala ukucwila, wamemeza, bathi: "Nkosi, Ndigcine."
14:31 Kwaoko uYesu isandla sakhe, wayibamba. Wathi yena kuye, "O encinane ukholo, uthandabuzelani na?"
14:32 Ke bakuba waya esikhepheni, umoya wathula.
14:33 Koko wasondela abo basemkhombeni wasondela waza waqubuda kuye, bathi: "Enyanisweni, wena unguye uNyana kaThixo. "
14:34 Ke kaloku awela ulwandle, Bakuba befikile kwilizwe Genesaret.
14:35 Ke kaloku amadoda aloo ndawo yaziwa kuye, athumela kuwo wonke loo mmandla, babazisa kuye bonke aba izifo.
14:36 Kwaye bacela kuye, ukuze ukuba khe bachukumise intshinga yengubo yakhe. ukuba basindiswa ke besindiswa abasukuba bemchukumisa.